အိုင်းရစ်ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
အိုင်းရစ်ဘာသာစကား (Gaeilge; အင်္ဂလိပ်: Irish) ကို အိုင်းရစ် ဂေးလစ် (သို့) အိုင်းရစ်ဟုသာ ညွှန်းဆိုကြ၍ အင်ဒို-ဥရောပ ဘာသာစကားမိသားစု၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ခဲလ်တစ်ဘာသာစကားမိသားစု၏ အခွဲ၊ သီခြားရပ်တည်ခဲလ်တစ်စကားမှ ဂွိုက်ဒဲလစ်ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်းရစ်စကားသည် အိုင်ယာလန်ကျွန်းတွင် စတင်သန္ဓေတည်ခဲ့ပြီး ၁၈ ရာစုနှောင်းအထိ ကျွန်းလူဦးရေ၏ မိခင်စကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းကစ၍ ကျွန်းရှိနေထိုင်သူအများစု၏ မိခင်စကားဖြစ်လာခဲ့သော်လည်း အိုင်းရစ်စကားကို ကျယ်ပြန့်သည့် ကောင်တီအချို့တို့၌ ပထမစကားအဖြစ် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ အိုင်းရစ်ကို ဒုတိယစကားအနေဖြင့်လည်း များစွာသောသူတို့က ပြေဆိုသုံးစွဲကြသည်။ အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံတွင် ပညာရေးပြင်ပ၌ နေ့စဉ်အသုံးပြုသူ ၇၃,၀၀၀ ခန့်ရှိ၍ အသက်သုံးနှစ်နှင့်အထက် အိုင်းရစ်စကားပြောဆိုသူသည် ၂၀၁၆ ဧပြီ စာရင်းအရ ၁,၇၆၁,၄၂၀ ရှိသောကြောင့် (စာရင်းကောက်မှု)ပြန်လည်ဖြေဆိုသူပေါင်း၏ ၃၉.၈% ရှိသည်။
ပြောသူ: ၁၇၀,၀၀၀ (ပညာရေးပြင်ပ နေ့စဉ်သုံးစွဲမှု: ၇၃,၀၀၀) (၂၀၁၉)e22
ပြောသူ: မသိရှိ (အသက် ၃နှစ်နှင့်အထက်၊ ၂၀၁၆ ဧပြီတွင် အိုင်းရစ်စကားပြောသူဟု ဆိုသူပေါင်း ၁.၇ သန်းကျော်)
၂၀၀၁ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ၏ ၃၆ % ဖြစ်သော ၆၅ သန်းကျော်သည် မြောက်အိုင်ယာလန်၌ အိုင်းရစ်စကားနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိဟုဆို
An Caighdeán Oifigiúil (အရေးသက်သက်)
သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် အထောက်အထားအများစုတွင် အိုင်းရစ်ဘာသာစကားသည် အိုင်းရစ်လူမျိုးများ၏ အဓိကဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကာ အိုင်းရစ်တို့သည် အခြားဒေသများသို့လည်း ၎င်းတို့နှင့်အတူ ဤဘာသာစကားကို ယူဆောင်သွားခဲ့ရာ စကော့တလန်နှင့် မန်းကျွန်းတို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး မန်းကျွန်း၌ အလယ်(ခေတ်)အိုင်းရစ်စကားသည် စကော့ဂေးလစ်စကားနှင့် မန့်ခ်စ်စကားတို့ကို ပေါက်ဖွားစေခဲ့သည်။ ၁၈၉၀ တွင် ကနေဒါ၌ အိုင်းရစ်စကားပြောသူ ခန့်မှန်းအရေအတွက် ၂၀၀,၀၀၀ - ၂၅၀,၀၀၀ ကြားရှိခဲ့သည်။ နယူးဖောင်းလန်းကျွန်း၌ အိုင်းရစ်ဒေသယိစကားတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သေးသည်။ အနည်းဆုံး ခရစ်နှစ် လေးရာစုသက်တမ်းရှိ အောဂန်ဟုအသိများသော အခြေခံအရေးအသားပုံစံ၊ ခရစ်နှစ် ၅ ရာစုမှစ၍ လက်တင်အက္ခရာသုံးရေးသည့်ပုံစံတို့နှင့်အတူ အနောက်ဥရောပတွင် ရှေးအကျဆုံးစာပေတို့ကို အိုင်းရစ်စကားကပိုင်ဆိုင်သည်။ အိုင်ယာလန်ကျွန်း၌ ဤအိုင်းရစ်စကားတွင် ဒေသယိစကားသုံးခုရှိရာ မန်စတာ (Munster) ၊ ခေါနော (Connacht) နှင့် အာလ်စတာ (Ulster) တို့ဖြစ်ကြပြီး ထိုသုံးခုစလုံးတွင် ကိုယ်ပိုင်အရေးအသား၊ စကားသံတို့ဖြင့် ထင်ရှားမှု အသီးသီးရှိကြသည်။ ၁၉၅၀ နှစ်များတွင် ပါလီမန်ကော်မရှင်က တည်ထွင်ပေးသော စံစနစ်အရေးပုံစံတစ်ခုလည်းရှိ၏ ။ လက်တင်အက္ခရာ ၁၈ လုံး၏ မူကွဲဖြစ်သော သီးခြားထင်ရှားလက္ခဏာရှိသည့် အိုင်းရစ်အက္ခရာတို့ကို စံလက်တင်အက္ခရာများက နေရာဝင်ယူအသုံးခံဖြစ်ခဲ့သည်။
အိုင်းရစ်ဘာသာစကားတွင် အခြေခံဥပဒေအရ အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားနှင့် မိခင်(ပထမ)ဘာသာစကားဖြစ်ရမည်ဆိုသည့် အဆင့်အတန်းတစ်ခုရှိကာ မြောက်အိုင်ယာလန်တွင်လည်း တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသည့် လူနည်းစုဘာသာစကားတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ တရားဝင်စကားများထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ခု Foras na Gaeilge သည် ကျွန်းတစ်လျှောက် ဘာသာစကားတိုးတက်ဖွံ့ဖြို့မှုကို ဆောင်ရွက်သည်။ အိုင်းရစ်ဘာသာစကားတွင် တရားဝင်ထိန်းသိမ်းသည့် အဖွဲ့အစည်းမရှိသော်လည်း ပါလီမန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ခုက လမ်းညွှန်လျှက် တက္ကသိုလ်အသိုင်းအဝိုင်း၏ ဖြည့်စွက်မှုနှင့်အတူ စေတနာ့ကော်မတီတစ်ခုက ဝေါဟာရအသစ်များကို လမ်းညွှန်ပြသသည်။ ယနေ့ခေတ် အိုင်ယာလန်၏ နယ်မြေများတွင် အိုင်းရစ်စကားကို ပထမ/မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုကြပြီး အိုင်းရစ်စကားကို အစုပြသဘောဖြင့် ဂေးလ်တာ့(ခ်တ်) (Gaeltacht) ဟု အသိများသည်။
↑ Irish was the first official language of the Irish state (1937, Constitution, Article 8(1)). Irish is not widely used as an L2 in most of Ireland, but its use is encouraged by the government.
↑ ၁.၀ ၁.၁ O'Gallagher, J. Sermons in Irish-Gaelic (1877) Gill
↑ Ó Flannghaile, Tomás For the Tongue of the Gael:aSelection of Essays and Philological on Irish-Gaelic Subjects (1896) Gill
↑ ၃.၀ ၃.၁ Our Role Supporting You။ 15 August 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “... between Foras na Gaeilge and Bòrd na Gàidhlig, promoting the use of Irish Gaelic and Scottish Gaelic in Ireland and Scotland ...'”
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Irish"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Gaelic definition and meaning | Collins English Dictionary။
↑ Gaelic: meaning in the Cambridge English Dictionary။ Cambridge University Press။ 25 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gaelic: Definition of Gaelic by Merriam-Webster။ Merriam-Webster, Incorporated။ 12 August 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Doyle၊ Danny (2015)။ Míle Míle i gCéin: The Irish Language in Canada။ Ottawa: Borealis Press။ p. 196။ ISBN 978-0-88887-631-7။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုင်းရစ်ဘာသာစကား&oldid=679836" မှ ရယူရန်
၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။